Ingabe amayintshi extra okhalweni nezinqulu? Wena yafakwa Kilos owengeziwe? Ufuna balahle kubo? Udinga ukudla neminye isisu izinhlangothi? Mina akudumaza - ingekho! Isakhiwo somzimba zomzimba womuntu awukwazi ihlanganise wendawo kwesisindo. Lahla isisu izinhlangothi kungenzeka kuphela Imininingwane kwesisindo. Futhi ukuthi kunendlela eyodwa kuphela indlela yokuthola figure enhle - inhlanganisela ukudla okuqinile kanye nokuzivocavoca.
Ukudla eliphumelelayo kwesisindo esiswini
Vele wenze ukubhuka, lokhu akukona Ukudla, okungase kube ukunamathela ngesonto ukulahlekelwa 10 kg futhi babe umnikazi sibalo ehambisanayo eziyengayo.
Ukudla neminye esiswini futhi izinhlangothi ukuchitha amandla ukwedlula ukuthola ukudla. Lokhu ingatholakala zinciphise isibalo zezinhlamvu kilojoule nsuku zonke idliwe amandla wamaqhuzu. Cabanga imininingwane.
Ngokunciphisa eyanele yakho nsuku zonke kilojoule, ngiqonde izibalo zezibalo yokuthola inani elidingekayo kilojoule for ukusebenza evamile umzimba wakho ne isisindo ukuthi une okwamanje, futhi ngenxa yalokho, ukuze ngalo ukubabela. Kancane kancane, kubalulekile ukuze unciphise inani kilojoule inqobo nje uma ayifiki inani wayefisa ukuba isisindo zaziswe. Kubalulekile futhi ukuba abale iphesenti amaprotheni, fat kanye carbohydrate ekudleni kwakho kwansuku zonke. Ngokuvamile, Ukudla neminye esiswini, engesiyo imenyu ehlukahlukene, kuhlanganisa:
- pasta eyenziwe durum ukolo;
- abilisiwe inkukhu webele;
- itiye eliluhlaza;
- imifino (ngaphandle beet kanye izaqathe);
- amafutha omnqumo noma amafutha flaxseed.
amandla Fractional - kuba esebenza ukudla izingxenye ezincane. Yini eyenza? Le ndlela ukudla kusiza ukuhlakaza umzimba (umzimba) namafutha uyaphakama ngokushesha.
Futhi Kuhle kokusho mayelana ukuqeqeshwa. Ngicabanga eziningi usuwazi ukuthi kukhona cardio namandla, okuyinto yena, zihlukaniswe Ukudonswa kwalawo manzi futhi ukuqeqeshwa classical ezinesisindo.
Cardio kukusiza ukuba uqinise inqubo ukukhululwa kwe-adrenaline futhi noradrenaline, okungukuthi, kunonophisa luhlelo lipolysis futhi kamuva ashise amanoni. Siyakwamukela imithwalo esindayo eside kodwa hhayi - abayikho kuphumelela kangcono. Njengokuhamba usheshe.
- ukuqeqeshwa classical - ke ukuqeqeshwa ikumodi evamile ngawe;
- Ukudonswa kwalawo manzi - kuyinto umsebenzi olunzulu kunoma iyiphi indawo eyodwa. Lokhu kuholela yokuthi imisipha is engorged ngegazi kanye ukukhululwa kwe-adrenaline futhi noradrenaline okukhulu ngaphezulu kule ndawo. Minus zalezi umzimba ukuthi namanoni ulahlekelwa yemisipha.
Naphezu kweqiniso lokuthi iningi okwamanje sithambekele ekubeni ezifana ukuqeqeshwa engqondweni, ochwepheshe belulekwa ukuba zithobele evamile ukuqeqeshwa umbuso ukuze engcono ukulondoloza yemisipha.
Ukudla neminye esiswini futhi izinhlangothi - a ukudla wamaqhuzu equkethe amandla esingaphansi isebenzisa umzimba. Ngakho, ngeke nje udinga ukuthatha zigcine zamandla imigqomo yabo.
Igolide kwesisindo ifomula:
Ukudla neminye isisu izinhlangothi + kuyofika izikhathi 3 ngesonto usheshe (ubude okungenani 1 ihora) + ukuqeqeshwa amandla zakudala kabili ngesonto + amandla nokubekezela = elamukelekile.
Rapeseed uwoyela: inzuzo noma umonakalo?
Ukudla Ukudla emva kokuhlinzwa wamathumbu
Anyanisi Indian: amandla magic bemvelo
Tough Ukuphuza Ukudla - imikhawulo kanye nemigomo
"Lecithin NSP" - luyasiza esisemqoka lendoda wanamuhla
Axillary ukuzikhohlisa izinkuni. Aluminium izinduku
Isifundo astromineralogii: itshe kufanelekile Aquarius
Eyedrops ngokuthuthukisa umbono: kanjani ukukhetha?
Cafe "ophahleni" (Kazan): incazelo kanye nokubuyekeza
Inhloko-dolobha yaseLuxembourg naseGrand Duchy